जटिल स्वास्थ्य समस्या झेल्दै नेपाली जनता | चितवन पोष्ट दैनिक
जटिल स्वास्थ्य समस्या झेल्दै नेपाली जनता
२०७१ फाल्गुन २२, शुक्रबार ०२:२० गते
जन्म र मृत्युको रहस्य आफ्नै ठाउँमा छ । कसैले पुनर्जन्म हुन्छ भन्छन्, कसैले हुँदैन भन्छन् । कसैले मान्छे मरेपछि ८४ लाख जुनीपछि फेरि मान्छेको रुपमा जन्मिन पाइने कथा हाल्छन् भने कोही मान्छे मरेपछि कुकुर, बिराला वा अर्को प्राणीको रुपमा जन्मिन पर्दैन, मान्छेकै रुपमा जन्मिन पाइन्छ भन्छन् । कोही शरीर नाश हुन्छ, आत्मा मर्दैन भन्छन् । भन्नेहरु थुप्रै छन् र त्यही संख्यामा सुन्नेहरु पनि छन् । जे होस्, मानवसमाजमा जन्म र मृत्युबारे लगातार छलफल र बहस भएका छन् र हुँदै पनि रहने छन् ।
सबैभन्दा पहिले जन्मिएपछि मान्छेको जीवनमा पहिले बाँच्ने कुराले प्राथमिकता पाउँछ । बाँच्न पाए नाच्न पाइन्छ । बाँचे हाँस्न पनि पाइन्छ । तर, नेपाल नामको यो मुलुकमा स्वस्थ शरीर लिएर बाँच्न पाउने अवस्था अब रहेन । शरीर स्वस्थ हुन्छ; स्वच्छ, सफा र ताजा खानेकुरा खानाले । हिजोआज यो मुलुकमा स्वस्थ र सफा खानेकुरा खान पाइँदैन । अरु खानेकुराको चर्चा पछि गर्दा फरक नपर्ला, पानी र दूधमा समेत हानिकारक किटाणु फेला परेपछि शरीर कसरी स्वस्थ हुन सकोस् ?
अब खानेकुरा र तरकारीको चर्चा गरौँ । यो मुलुकमा खानेकुराको रुपमा दाल, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, चना, भटमास, चिउरा, भुजा आदि नामका केही अन्न र केही तरकारीको रुपमा प्रयोग हुने गरिने खाद्यान्नहरु प्रयोगमा रहेका छन् । कसैले किनेको र कसैले बेचेको अवस्था छ, तर यी खरिद बिक्री भएका अन्नहरुको कहिल्यै मिति सकिएन । अर्थात्, पाँच वर्षअघि बोरामा राखिएको चामल वा गहुँ पाँच वर्षपछि पनि खाने खुवाउने गरिएको छ । यस्ता खाद्यान्न उत्पादन भएको दिनदेखि कुन मितिसम्म खान सकिन्छ भनेर न यो देशका कृषि वैज्ञानिकहरुले भने, न सरकारले भन्यो, न त आफूलाई जान्ने बुझ्ने दाबी गर्नेहरुले नै जानकारी दिए । वर्षौंवर्षअघिदेखि आजसम्म यो मुलुकमा अन्नको आयु सकिएन । यसको अर्थ नेपाली जनताले खान नहुने अन्न खाइरहेको प्रस्ट छ ।
यो त भयो कच्चा अन्न अर्थात् काँचो अन्न । पकाएर बेच्ने गरिएका खाद्यान्नहरुको चर्चा गर्दा घिन लाग्छ, वाकवाकी पनि लाग्छ । होटलमा कतै छोपेर राखिएको त कतै नछोपी राखिएको खानेकुराहरु पाइन्छ । कतिदिनको बासी हो, कसैलाई थाहा छैन । बेच्नेलाई पैसा पाए अर्थोक चाहिँदैन । दुनियाँका स्वास्थ्य बिग्रिनु नबिग्रिनुसँग व्यापारीलाई कुनै चासो छैन । पैसा पाए कुनै व्यक्ति बिरामी होस्, उसलाई केही वास्ता छैन । खुलेआम यो देशमा धूलोले भरिएको, झिँगा भन्किएको, अमिलो गन्ध आइसकेको खानेकुरा बेचिएको छ । दिमागले काम नगरेर नांगै हिँड्ने महिला वा पुरूष बोल्ने कुरै भएन, गरिब र आज खाए भोलि के खाऊँ, भोलि खाए पर्सिको छाक कसरी टारौँ भन्ने अवस्थाका मान्छेहरुको बोल्ने फुर्सदै हुँदैन । धनी, शिक्षित र बडेबडे चिन्तन गर्नेहरु समेत यो अवस्थाबारे जानकार भएर पनि एक शब्द बोल्दैनन् । यिनीहरु भन्दैनन्, “बासी र सडेगलेका खानेकुरा बिक्री र प्रयोग बन्द गरौँ ।”
मिठाईमा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने रंग मिसाउन हुँदैन, तर मिसाइएको छ । केरा, मेवालगायतका फलफूल चाँडो पकाउन कार्बाइड नामको रसायन प्रयोग गरिएको छ, जसले मानव स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर पु¥याउँछ । तर, न स्वास्थ्य क्षेत्र हाँक्ने कोही चासो दिन्छ, न कोही छ यो मुलुकमा जो यस्तो काम नगर भन्छ । अमेरिका र युरोप घुमेर त्यहाँको नियम कानुन बुझेर आएका नेपालका धनी वर्ग, सांसद्, मन्त्रीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ, “अमेरिकाको कुनै होटल वा रेस्टुरेन्टमा खानेकुरा खाँदा कोही बिरामी भयो र खानाकै कारण बिरामी भएको उजुरी प¥यो भने तुरून्तै जाँच हुन्छ । यदि होटल वा रेस्टुरेन्ट सञ्चालक दोषी ठहरिए बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्छ, क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ, होटल रेस्टुरेन्टको अनुमति पत्र रद्द हुन्छ र सञ्चालकलाई अवस्था हेरी जेल सजायसमेत हुन सक्छ । तर, यो मुलुकमा चाहे मासु बासी बेच वा भात, चाहे कार्बाइड प्रयोग गर वा अर्को कुनै घातक रसायन, कसैलाई केही चासो भएन । जसरी–तसरी पैसा कमाउन, लुट्न पाए सबैलाई भयो । यसलाई भयो, उसलाई भयो, सबैलाई भयो । अपवादलाई छाडेर हरेक मान्छे आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य छाडेर लुट्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कोही सीधै उत्रिए, कोही छड्के बाटोबाट उत्रिए, पैसा लुट्नलाई सबका सब उत्रिए ।
अरु विषयमा लुट्ने लुटाउने खेलले मान्छे मर्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्ता खेल खेल्दा कोही धनी होला वा कोही गरिब होला, त्योभन्दा बढी हुँदैन तर जहाँसम्म सवाल खानेकुरा र पिउने कुरामा लुट मच्चाइन्छ, खान नहुने अवस्थाको खानेकुरा र पिउन अयोग्य भइसकेको पेय पदार्थ बिक्री गरिन्छ, त्यतिबेला मान्छे स्वास्थ्य बिग्रिएर मर्ने अवस्थामा पुग्छ । ढिला पुग्ने, चाँडो पुग्ने बेग्लै विषय भयो, तर मर्ने अवस्थामा पुग्छन् र पुगिरहेका पनि छन् ।
पहिले–पहिलेका मानिसहरुले के तरिकाले खान्थे र के–के खान्थे, अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ला । तर, नेपाली नागरिक समाजमा भात, ढिँडो र रोटीसँग तरकारीका रुपमा आलु, काउली, बन्दा, मूला, गोलभेँडा, फर्सी, लौका आदि खाने गरिएको छ । विडम्बनाको विषय, यी तरकारी उत्पादन गर्दा कीरा मार्ने उद्देश्यले हालिएको विषको मात्रा ज्यादा हुँदा विभिन्न नामका तरकारी खाँदा नेपाली उपभोक्ताको शरीरमा त्यही विषले असर गर्दा सयौँ होइन, हजारौँको संख्यामा क्यान्सर रोगीहरु देखा परिसकेका छन् । तरकारीमा हालिएको विषका कारण एकातर्फ रक्तक्यान्सर रोगीहरुको संख्या बढेको छ भने अर्कोतर्फ अखाद्य खानेकुरा र तेल प्रयोगका कारण नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौला रोगबाट पीडित भएको चितवनका डाक्टरहरुले जानकारी दिएका छन् ।
हिजोआज गर्मी याम होस् वा चाडो, जुनसुकै मौसममा पनि मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगौला रोगीको संख्या बढेकै देखिन्छ । ४० वर्ष उमेर कटेका युवायुवतीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले दैनिक उच्च रक्तचाप र मधुमेहको ओखती खाइरहेका छन् । ६० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाको त के कुरा, सबका सबलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगले गाँजिसकेको छ भन्दा हुन्छ । प्रमाणका लागि चितवनको भरतपुर इलाकामा स्थापित अस्पतालहरुका प्रयोगशालामा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढे घटेको जँचाउने मान्छेहरुको लाइन र औषधि पसलहरुमा उच्च रक्तचापका रोगीहरुले खरिद गर्ने औषधिको मात्रा हेर्न सकिन्छ । हिजोआज चितवन जिल्लामा मात्रै अपवादलाई छाडेर कुनै एउटा परिवार छैन, जहाँ उच्च रक्तचाप र मधुमेहको रोगी नहोस् ।
विडम्बना, यो र यतिमात्र होइन । यतिबेला जो उच्च रक्तचापको रोगी छ, उसका सन्तानमा यो रोग देखा पर्ने ८० प्रतिशत सम्भावना रहन्छ भने मधुमेह हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यो कोणबाट व्याख्या गर्दा आजका पीडितहरु मात्रै पीडित हुने अवस्था रहेन, यिनले भोलिका दिनमा जन्माउनेहरु पनि रोग बोकेरै जन्मिने भए भने जन्मिएपछि अखाद्य खानेकुरा खाएर रोग थपिने अलग विषय
भयो । अहिले भएका पनि रोगी, अब जन्मिने पनि रोगी भएपछि यो देशको हालत कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देश भनेको ढुंगा, माटो, बालुवा, जंगल, जंगली जनावर र पानी अनि डाँडाकाँडा मात्रै होइन, तोकिएको सिमानाभित्र बस्ने कुनै एक वा बहुभाषा बोल्ने मान्छेहरु पनि हो । मान्छेबिनाको देशलाई दुनियाँमा कसैले पनि देश भन्दैन । नदीमाथि तीन सय वर्ष ग्यारेन्टीवाला पुल हाल्ने, देशभरि चिल्ला सडक बनाउने, दस तल्लाभन्दा बढीका अत्याधुनिक भवनहरु बनाउने, एकैपटक एक लाख मान्छेहरुले खान र सुत्न, उस्तै परे डान्स गर्न पनि मिल्ने फाइभ स्टार होइन, त्यसमा अरु दुई–चारवटा स्टार थपिएका होटल बनाउने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको खोज गर्ने र भेटिए उत्पादन गर्ने, मुलुकभित्रै सुन र हीराखानी पत्ता लगाउने गरे पनि आखिर हरेक मान्छे रोगी भएर शारीरिक रुपमा दुर्बल भए यी सबै भौतिक विकास गर्नुको के अर्थ ? आज गर्न खोजिएको यस्तै होइन ?
सबैभन्दा पहिले राज्यले जनता बचाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै अरु विषयमा सोच्ने कुरा हुन्छ । जनता बचाउनका लागि अन्यभन्दा
जनताको स्वास्थ्यमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले खानेकुरा र पानीमा शुद्धता ल्याउनु पर्छ । आजदेखि खाना र पानीमा शुद्धता दिलाउने प्रयास गरियो भने परिणाम आउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । अहिलेको अवस्था परिवर्तन भएर बिस्तारै–बिस्तारै रोगीहरुको संख्यामा कमी आउन थाल्ने छ । त्यसका लागि जनअधिकार रक्षा शीर्षकमा आउने संविधानमै “स्वस्थ भोजन, शुद्ध पानी” जनताको अधिकार उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यदि यो तरिका नअपनाउने हो भने काठमाडौँका कुहिएको गुँदपाक बेच्ने जनहत्याराहरुलाई नाममात्रैको कानुनी कार्बाही गरेर सधैँभरि उन्मुक्ति दिने गरिन्छ भने अरु केही समय लाग्ला, तर हुने चाहिँ यही हो कि यो मुलुकमा मान्छे रहने छैनन्, रहे पनि रोगीहरु मात्रै रहने छन् । रोगी नै रोगीले भरिएको देशलाई देश होइन, दुनियाँले “रोगीहरुको मुलुक कुन हो” भन्ने हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा प्रश्न सोध्ने छन् र गलत जवाफ दिनेले अर्कै नाम भन्ला, तर ठीक जवाफ दिनेले “नेपाल” भन्ने छ । त्यसैले सत्ताधारीहरु, सत्ता ताक्नेहरु आजको सत्ता टिकाउछौँ र भोलि सत्ता पाउने आशा गर्छौं, मान्छेसहितको देशमा शासन गर्न रूचाउँछौ भने सबैभन्दा पहिले देशभित्र अन्न र पानीलाई शुद्ध
बनाऊ । अखाद्य वस्तु खुवाउने, बेच्ने, ओसारपसार गर्नेलाई कानुनमै व्यवस्था गरेर जेल चलान गर । दुई–चार दिन र दुई–चार महिना होइन, आजीवन जेलमा थुन्ने व्यवस्था गर । खाद्यान्नमा हेलचेक्र्याइँ गर्नेलाई संसारका मानव समुदायमा बिरलै बनाइने कडा कानुन बनाएर सजाय देऊ । यसपछि मात्रै यो देशमा निरोगी जनताको उपस्थिति हुने छ ।
निरोगी जनताको मेहनतले आज नभए भोलि, भोलि नभए कुनै दिन यो नेपाल विकसित देशको दाँजोमा पुग्न सक्ने छ । बाँकी सोच्ने काम राउटे र चेपाङहरुको होइन, खोलाको किनारमा गिट्टी कुटेर लालाबालाको सुकेका आन्द्रामा अन्न हालिदिने प्रयास गर्ने विपन्न वेवारिसे मजदुरहरुको पनि होइन । हो भने अहिले शासनमा रहेका दल र नेतृत्व पंक्तिको हो । प्रतिपक्षी र अन्य राजनीतिक दलहरुको हो । त्यतिमात्रै पनि होइन, दुई अक्षर पढेको गफ दिने, आफूलाई मानवअधिकारकर्मी बताउने र आफूलाई सक्षम दाबी गर्ने ती सबै सबैको हो, ज–जसले आफूलाई जिम्मेवार नेपाली बताइरहेका छन्, चेतनशील दाबी गरिरहेका छन् । अन्तिम ठूलो र मह¤वपूर्ण जिम्मेवारी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको हो, तर यति भन्दैमा वृद्ध प्रधानमन्त्रीको थाप्लामाथि हरेक चीज थोपर्ने पनि होइन, ज–जसले सक्छ त्यही–त्यहीले यो डरलाग्दो समस्या समाधानमा मद्दत गर्नुपर्छ ।